Induction brazing heater | Umakhi womshini wokushisa wokungeniswa | izixazululo zokushisa zokungeniswa
ukukhishwa kwesibhakabhaka sokungena
I-High Frequency Induction Brazing Steel Tube kuya ku-Copper Tube Objective Inhloso ukubopha ithubhu lensimbi liye kushubhu yethusi ngemizuzwana engama-60 usebenzisa i-flux ne-brazing alloy. Izinsiza kusebenza I-DW-UHF-10kw induction brazing heater Izinto ezintathu zijika kabili ikhoyili Izinto zokwakha • Insimbi yensimbi nesamukeli sethusi • I-Braze alloy (CDA 681) • B-1 flux… Funda kabanzi
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi ukugqolozela, Ishubhu yensimbi e-Brazing, ukubopha ithubhu lensimbi kushubhu yethusi, thenga i-heater brazing heater, I-HF brazing tube, ukukhishwa kwe-frequency ukufakwa, Ukukhishwa kwesibalo, ukukhishwa kwesibhakabhaka sokungena, inqubo yokukhishwa kwe-induction, i-steel tube brazing, insimbi yensimbi kuya kushubhu yethusi yethusi
Lokungeniswa Brazing T Shaped yethusi tubing Imihlangano
I-High Frequency Induction Brazing T Shaped Copper Tubing Assemblies Objective: Isivivinyo 1 - Ukukhishwa kwe-induction bronze T-shaped imihlangano yeshubhu yethusi - amalunga ama-3 ngasikhathi sinye Test 2 - Induction brazing copper tubing Industry: Izinto ze-HVAC: Izilimo eziyizigaxa zethusi 6, 8, 10, 12 mm (015 ⁄64, 05-16, 025⁄64, 015⁄32inch.); ukushuba: 1 mm (03⁄64 inch.) Ingxubevange: Cu-P-Ag izindandatho ISU LOKUSEBENZA: Ukusetshenziswa kwezindandatho zengxubevange kakhulu… Funda kabanzi
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi brazing t yethusi, brning t tubing, ukufakwa kwesibhakela ngethusi, ukukhishwa kwesibhakabhaka sokungena, Umshini wokushisa wokufakelwa, uhlelo lokungenisa impahla, lokungeniswa lokugcotshwa T, lokungeniswa braring T yethusi, T imibhobho yethusi igqamile, UHF ubheka, UHF ubheka i-tubing yethusi
Umshini Wokubamba Insimbi
Induction Brazing Machine & Izinsiza kusebenza zeSoldering
1. Kusetshenziswe imodyuli ye-IGBT nobuchwepheshe bokuguqula isizukulwane sokuqala.
2. Isakhiwo esilula nesisindo esincane futhi kulula ukugcinwa.
3. Ilula ukusebenza, imizuzu embalwa yanele ukuyifunda.
4. Kulula ukufaka, ukufakwa kungenziwa ngumuntu ongasebenzeli kalula.
5. izinzuzo zemodeli nge-timer, amandla nesikhathi sokusebenza kwesikhathi sokushisa nesikhathi semvula kungasetwa kabusha ngendlela efanele, ukuze kutholakale ijika elilula lokushisa, le modeli iphakanyiswa ukuthi isetshenziselwe ukukhiqizwa kwe-batch ukwenza ngcono ukuphindeka.
6. Amamodeli ahlukanisiwe aklanyelwe ukulingana nokuzungeza okungcolile kwamanye amacala.
Amandla wokufaka max
I-max Max yamanje
I-DW-MF-15 Induction Generator
I-DW-MF-25 Induction Generator
I-DW-MF-45 Induction Generator
I-DW-MF-70 Induction Generator
I-DW-MF-90 Induction Generator
I-DW-MF-110 Induction Generator
I-DW-MF-160 Induction Generator
I-DW-MF-45 Ukushisa Ukudonsa I-Rod Yokufaka Isithanga
I-DW-MF-70 Ukushisa Ukudonsa I-Rod Yokufaka Isithanga
I-DW-MF-90 Ukushisa Ukudonsa I-Rod Yokufaka Isithanga
I-DW-MF-110 Ukushisa Ukudonsa I-Rod Yokufaka Isithanga
I-DW-MF-160 Induction Heating Rod Yokufaka Isithando Somlilo
I-DW-MF-15 Induction Melting Furnace
I-DW-MF-25 Induction Melting Furnace
I-DW-MF-35 Induction Melting Furnace
I-DW-MF-45 Induction Melting Furnace
I-DW-MF-70 Induction Melting Furnace
I-DW-MF-90 Induction Melting Furnace
I-DW-MF-110 Inkokhelo Yokuqothula Isihenqo
I-DW-MF-160 Inkokhelo Yokuqothula Isihenqo
I-DW-MF-110 Induction Equipment Hardening Equipment
I-DW-MF-160Iuction Equipment Ezikhandlayo
Isigaba esisodwa se-220V
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi Imishini yokubuka i-HF, ukukhwabanisa okuphezulu, iyunithi ephezulu yokubuka imishini, ukukhishwa kwe-frequency ukufakwa, high frequency soldering heater, Ukukhishwa kwesibalo, imishini yokusebenza yokubopha, lokungeniswa esivuthayo somlilo, ukukhishwa kwesibhakabhaka sokungena, Umshini wokushisa wokufakelwa, inqubo yokukhishwa kwe-induction, uhlelo lokungenisa impahla, imvamisa yomsakazo ibhula ithusi, imvamisa yerediyo brazing heater, RF isibhamu, Umshini wokubuka i-RF
Ama-Basics Brazing Basics
Ama-Basics Brazing Basics ngokujoyina ithusi, isiliva, ubhontshisi, insimbi nensimbi engagqwali, njll.
I-Induction Brazing isebenzisa ukushisa nensimbi yokugcwalisa ukujoyina izinsimbi. Uma sekuncibilikile, ukugcwaliswa kugobhoza phakathi kwezinsimbi eziseduze (izingcezu ziyahlanganiswa) nge-capillary action. I-filler encibilikayo ihlangana noqweqwe oluncane lwensimbi eyisisekelo ukwakha inhlanganisela eqinile, evuzayo. Imithombo ehlukene yokushisa ingasetshenziselwa ukubhontshisa: ukufakwa kokungeniswa kanye nokumelana nokushisa, ama-ovini, izithando, izibani, njll. Kunezindlela ezintathu ezivamile zokubopha: i-capillary, notch nokubumba. Ukubanjwa kwe-induction kukhathazeke kuphela okokuqala kwalokhu. Ukuba negebe elifanele phakathi kwezinsimbi eziyisisekelo kubalulekile. Igebe elikhulu kakhulu linganciphisa amandla we-capillary futhi liholele kumajoyini abuthakathaka kanye ne-porosity. Ukunwetshwa okushisayo kusho ukuthi izikhala kufanele zibalwe ngezinsimbi ekubhuliseni, hhayi endaweni, emazingeni okushisa. Isikhala esihle ngokujwayelekile si-0.05 mm - 0.1 mm. Ngaphambi kokuthi ubhodlise iBrazing ayinankinga. Kepha eminye imibuzo kufanele iphenywe - futhi iphendulwe - ukuze kuqinisekiswe ukujoyina okuphumelelayo, okungabizi kakhulu. Isibonelo: Zifanele kangakanani izinsimbi eziyisisekelo zokubopha; yini idizayini enhle kakhulu yekhoyili yesikhathi esithile nezidingo zekhwalithi; ngabe ukubopha kufanele kube okwenziwa ngezandla noma okuzenzakalelayo?
E-DAWEI Induction siphendula lawa namanye amaphuzu abalulekile ngaphambi kokuphakamisa isisombululo se-brazing. Gxila ezintweni ezigelezayo ze-Base izinsimbi kumele zivame ukufakwa ne-solvent eyaziwa ngokuthi yi-flux ngaphambi kokuba iboshwe. I-Flux ihlanza insimbi eyisisekelo, ivimbela i-oxidation entsha, futhi imanzise indawo yokubheda ngaphambi kokubopha. Kubalulekile ukufaka ukucucuza okwanele; kuncane kakhulu futhi ukugeleza kungaba
igcwele ama-oxide futhi ilahlekelwe amandla ayo okuvikela izinsimbi eziyisisekelo. I-flux ayidingeki njalo. Ukugcwalisa okune-phosphorus
ingasetshenziselwa ukubopha ama-alloys ethusi, ithusi nethusi. Ukuboshwa okungenayo i-flux nakho kungenzeka ngama-atmospheres asebenzayo kanye nama-vacuum, kepha ukubopha kufanele kwenziwe egumbini lomoya elilawulwayo. I-flux kufanele isuswe engxenyeni lapho ukufakwa kwensimbi sekuqinile. Kusetshenziswa izindlela ezahlukahlukene zokususa, okuvame kakhulu ukucisha amanzi, ukukha amanzi nokuxubha ucingo.
Izigaba Imibuzo Evame Ukubuzwa Amathegi ukukhwabanisa okuphezulu, igbt ukukhishwa ubhontshisi, Ama-Basics Brazing Basics, ukukhishwa kwesibhakabhaka sokungena, isimiso sokungeniswa kwe-induction, inkolelo yesibhakabhaka